Ndị na -emepụta ezé ịwụ ịkwa akwa | China Forging ịwụ ezé Suppliers & Factory
9W8459 Penetration excavator ịwụ ndụmọdụ J450 maka Cat 330 336
9W8459 Penetration excavator ịwụ ndụmọdụ J450 maka Cat 330 336, 9.9kgs, ezigbo arụmọrụ arụmọrụ yana ezigbo mgbochi na-eyi. Nrụpụta Aili emechaala ụdị ihe eji eme ihe n'ụwa niile na -anọchi akụkụ mgbanaka, nwere ike ịnye gị azịza gị niile maka akụrụngwa gị dị arọ.
Clamshell Nha nha Clamshell Adapter ihe mkpuchi ihe ochie 4047166 4046816
4047166 4046816 Clamshell Tooth Clamshell Adapter ihe nrụpụta ihe ọhụrụ na -anọchi ngwaọrụ Bofor na -etinye aka na ala. Nkwado dị elu na ezigbo ọrụ sitere na nrụpụta Aili. Aili Aili ekesala aha ọma site n'aka ndị nnọchi anya ụwa niile. Iji bụrụ klaasị mbụ nke ụdị ama ama n'ụwa na nkedo na ịkwa akwa excavator akụkụ nrụpụta bụ ịchụpụ Aili mgbe niile. Aili ji obi ụtọ nabata gị ileta ma sonyere anyị, ka anyị bụrụ ezigbo ndị mmekọ.
1U3302 1U3352 ọkọlọtọ Nkume ịkpụ ezé ịwụ maka ihe ndị na -egwupụta ihe
1U3302 1U3352 ọkọlọtọ Nkume ịkpụ ezé ịwụ maka ihe ndị na -egwupụta ihe, yana usoro nrụpụta ihe. Njirimara arụ ọrụ ka mma, na-eguzogide karịa na ndụ ọrụ ogologo.
61Q6-31310RC XD225RC bọket excavator na-edochi nha nha maka Hyundai
61Q6-31310RC XD225RC bọket mgbapu ịwa nha nha dochie anya Hyundai, yana usoro nrụpụta ihe. Njirimara arụ ọrụ ka mma, na-eguzogide karịa na ndụ ọrụ ogologo.
PC60 PC200 205-70-19570RC PC300 207-70-14151RC iberibe ezé ịwụ na-anọchi Komatsu excavator
PC60 PC200 205-70-19570RC PC300 207-70-14151RC iberibe ezé ịwụ na-anọchi Komatsu excavator, yana usoro nrụpụta ihe. Njirimara arụ ọrụ ka mma, na-eguzogide karịa na ndụ ọrụ ogologo.